ကြောင်း Modafinil ကောင်းစွာ brainpowder အလုပ်တိုးမြှင်တကယ်လား? | AASRAW ကုန်ကြမ်း
/ဘ‌‌လော့ခ်/modafinil/ကြောင်း Modafinil ယူပြီးပြီးနောက်ကောင်းစွာ brainpowder အလုပ်တိုးမြှင်တကယ်လား?
အပေါ် Posted 02 / 12 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil.
brainpowder တိုးမြှင်အတွက်တကယ် Modafinil Is ယူပြီးနောက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်?
1.What modafinil ၏ကြင်နာပါသလဲ 2.How modafinil အလုပ်သနည်း
modafinil သုံးရန် 3.How? 4.How ငါ modafinil (Provigil) ယူသင့်သလဲ
modafinil ကုန်ကြမ်းမှုန့် 5.The ဆိုးကျိုးများ 6.It brainpowder တိုးမြှင်အတွက် modafinil အဘို့သည်ကြီး
7.How အွန်လိုင်း modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
1.What Modafinil ၏ကြင်နာပါသလဲ
Modafinil စီစဉ်ထားနှိုးနာရီနှင့်အခက်အခဲကာလအတွင်းအိပ်ညဥ့်အခါသို့မဟုတ်ဆိုင်းအလှည့်အလုပ်လုပ်သူတွေကိုအတွက်စီစဉ်ထားအိပ်ပျော်နေတဲ့နာရီအတွင်းအိပ်ပျော်ကျသွားသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်တည်းခို (narcolepsy ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ် (အလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ငိုက်ခြင်းဖြစ်စေသည်တဲ့အခွအေနေ) ဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ shift အသုံးပြုသည် ) ။ Modafinil နှင့်အတူလည်းအသုံးပြုပါသည် အသက်ရှူ devices များ ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ် / hypopnea syndrome ရောဂါ (; လူနာခေတ္တအသက်ရှူရပ်သို့မဟုတ်အိပ်နေစဉ် shallowly အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှူရှိုက်ထို့ကြောင့်အလုံအလောက်မှေးကွိုအိပ်စက်ခြင်းမရပေရာတစ်ဦးအိပ်စက်ခြင်းရောဂါ OSAHS) ကဖြစ်ပေါ်စေအလွန်အကျွံအိပ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြားကုသမှု။ Modafinil ဟုခေါ်တွင်ဆေးဝါးများ၏အဆင့်အတန်း၌တည်ရှိ၏ နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်အေးဂျင့်။ ဒါဟာအိပ်စက်ခြင်းမနိုးထိန်းချုပ်သောဦးနှောက်၏ဧရိယာ၌အချို့သောသဘာဝအတ္ထုများ၏ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
2.How Modafinil လုပ်ငန်းခွင်သနည်း
Modafinil တဦးတည်းအရာလုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့ကျယ်ပြန့်သတ်မှတ်မတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည်: awake.By ယခုသင်ဖြစ်ကောင်းလူတိုင်းက Tim Ferriss ထံမှ Dave မှ Asprey ကြောင်းမှကြားဖူးတယ်သငျသညျစောငျ့ရှောကျ သမ္မတအိုဘားမားတစ်ချိန်ချိန် Modafinil ယူထားပြီးသမ္မတဦးသိန်းစိန်.
သူတို့ဟာ alone.Entrepreneurs, ဆရာဝန်တွေ, programmer တွေ့ငါသိလူတိုင်းအတွက် Modafinil အကြောင်းကိုကြားသိသို့မဟုတ်ယင်း၏ကြီးထွားလာအယူခံဝင်ပေမယ့်ဒါဟာ themselves.Yet ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး, လူအနည်းငယ် Modafinil အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုငါသိ၏။
ဒါက 1) Modafinil အသုံးပြုမှုအများဆုံး Off-တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်, အိန္ဒိယအတွက်ကျပန်းဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်လုပ်မယ့်အဓိပ္ပာယ်နှင့် 2) ကသာတကတစ်မိနစ်ပြန်နင်းရကျိုးနပ်မယ့်, ထိုကဲ့သို့သော time.As ပိုမိုလူကြိုက်များရသွားရဲ့ပေးသော, အသေးစားပြဿနာရဲ့ ကျနော်တို့အလုပ်အတွက်ယူဒီနည်းနည်းအဖြူရောင်ဆေးလုံးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ။
modafinil သုံးရန် 3.How?
Modafinil နှုတ်ဖြင့်ယူမယ့်တက်ဘလက်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ရက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမရှိဘဲတခါယူသည်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် modafinil ယူပြီး narcolepsy ကုသရန်သို့မဟုတ် OSAHSသငျသညျဖြစ်ကောင်းနံနက်ယံ၌ယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါကုသရန် modafinil ယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်း 1 နာရီသင်၏အလုပ်ပြောင်းကုန်ပြီ၏အစအဦးရှေ့မှာယူပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာ modafinil ယူပါ။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်စကားပြောမပါဘဲ modafinil ယူသည်ထိုနေ့၏အချိန်မပြောင်းပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အလုပ်ပြောင်းကုန်ပြီနေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာစတင်မပါဘူးဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။ ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွန် Follow, သင်နားမလည်ကြဘူးဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးမေးကြည့်ပါ။ ညွှန်ကြားအဖြစ်အတိအကျ modafinil ယူပါ။
Modafinil အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းဖြစ်နိုင်သည်။ , ပိုကြီးတဲ့ဆေးထိုးယူကပိုမကြာခဏယူ, သို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်ထက်အချိန်ပိုရှည်ကာလအဘို့အယူမထားပါနဲ့။
Modafinil သင့်ရဲ့အိပ်လျော့စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေမည်မဟုတ်။ သငျသညျကောင်းစွာ-ရာကြွင်းလေသမျှခံစားမိလျှင်ပင် modafinil ယူ Continue။ modafinil အချိန်ဇယားကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်သင်ပိုကောင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ doctor.Please စကားပြောမပါဘဲ modafinil တာကိုရပ်တန့်မနေပါနဲ့။
Modafinil အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရတဲ့နေရာမှာမသုံးသင့်ပါတယ်။ ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအလေ့အထအကြောင်းကိုသင်၏ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာပါ။ သငျသညျ OSAHS ရှိတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, သင်၏ဆရာဝန်ကသင့်အခွအေနေကုသရန်သတ်မှတ်ထားသောမူကြောင်းကိုမဆိုအသက်ရှူ devices များသို့မဟုတ်အခြားကုသမှုသုံးစွဲဖို့ Continue ။
4.How ငါ modafinil (Provigil) ယူသင့်သလဲ
သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျကိုယူပါ။ ပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်ပမာဏသာရှိသို့မဟုတ်အကြံပြုထက်ပိုရှည်ဘို့ယူမထားပါနဲ့။ Modafinil များသောအားဖြင့် 12 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပေးတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။
ဤသည်ဆေးဝါးလုံခြုံပြီးထိရောက်သောအသုံးပြုမှုအတွက်လူနာညွှန်ကြားချက်နှင့်တကွကြွလာ။ ဤအလမ်းညွန်ဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုမေးပါ။Modafinil များသောအားဖြင့်အလုပ်အချိန်အိပ်ပျော်ခြင်းမမှန်ဆက်ဆံဖို့အလုပ်ပြောင်းကုန်ပြီရဲ့ start မတိုင်မီနေ့ခင်းဘက်အိပ်, သို့မဟုတ် 1 နာရီကာကွယ်တားဆီးဖို့တစ်ဦးချင်းစီနံနက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
သငျသညျပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အိပ်ဆက်ဆံဖို့ modafinil ယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျလညျးနဲ့ကုသစေခြင်းငှါ စဉ်ဆက်မပြတ်အပြုသဘောလေဖိအား (CPAP) စက်။ ဒီအစက်ကိုသင်အိပ်နေစဉ်ညင်ညင်သာသာသင့်ရဲ့နှာခေါင်းထဲသို့ဖိအားပေးထားတဲ့လေထုမှုတ်တဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လေထုစုပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစုပ်စက်သင်တို့အဘို့အသက်ရှူမပါဘူး, ဒါပေမယ့်အာကာသကောင်းကင်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့အင်အားအဆီးအတားကာကွယ်တားဆီးဖို့ပွင့်လင်းသင့်ရဲ့လေကြောင်းစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
သင့်ဆရာဝန်မှသင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်လျှင်အိပ်နေစဉ်သင့်ရဲ့ CPAP စက်သုံးပြီးရပ်တန့်မနေပါနဲ့။ CPAP နှင့် modafinil နှင့်အတူကုသမှု၏ပေါင်းစပ်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏အခွအေနေကုသရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
Modafinil ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ကုသသို့မဟုတ်ယင်း၏နောက်ခံအကြောင်းတရားများဆက်ဆံပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤဆေး modafinil.Taking ယူပြီးပယ်သွားအစိုဓာတ်ကိုကနေတဲ့အခန်းအပူချိန်မှာအလုံအလောက် sleep.Store ရတဲ့၏အရပျကိုမယူပါဘူးတောင်မှစဉ်အလွန်အကျွံအိပ်ရှိသည်တည်လျှင်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူဤ disorder.Talk အားလုံးကိုသင့်အခြားကုသမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့် heat.In ထို့အပြင်အဆိုပါ momafinil သောက်သုံးသောအကြံပြုကြလိမ့်မည် 30-50mg ဖြစ်ပါတယ်။
Modafinil ကုန်ကြမ်းမှုန့် 5.The ဆိုးကျိုးများ
Modafinil ၏အကျိုးကျေးဇူးများ ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
modafinil ၏အကျိုးကျေးဇူးများထူးထူးအပြားပြားဖြစ်ကြပြီးလွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျယ်ကျယ်သုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ဒီအိပ်စက်ခြင်း-ဆုံးရှုံးအခြေအနေများအောက်တွင်တိုက်ခိုက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုစစ်သားများနှင့်လေယာဉ်မှူးများအတွက် tool အဖြစ် modafinil အတွက်စစ်တပ်နှင့်အစိုးရအကျိုးစီးပွားကြောင့်ဖြစ်သည်။
မျိုးစုံလေ့လာမှုများအရ, သည့်အခါပင်ပန်းနွမ်းနယ်များတွင်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းလည်းမရှိ modafinil သုံးပြီး ။ အသုံးပြုသူများသည်အတွေ့အကြုံအိပ်ရေးပျက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှု modafinil သုံးပြီးပြီးနောက်ကြီးထွားနေသည် (သို့မဟုတ်အားနည်းချက်တွေ negated ကြသည်) ကွောငျးတှေ့ hyperinsomnia ရှိသည်။
modafinil ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးယေဘုယျသိမြင်မှုစွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်. နှငျ့အတူရှိ၏။ Modafinil သိမြင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြားစမ်းသပ်မှုများအလုပ်မလုပ်, တုံ့ပြန်မှုအချိန်အားဖြင့်တိုင်းတာနေကြရသော။ အကျိုးကျေးဇူးများ Non-အိပ်ပျော်ခြင်းဆုံးရှုံးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့လျော့နည်းနေမြဲနေစဉ်ကြောင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအရွယ်ရောက်နေဆဲ modafinil အသုံးပြုခြင်းမှသိမြင်မှုအကြိုးခံစားခှငျ့မွငျနိုငျသောအသိသာသည်။
modafinil များအတွက်အကြိုက်ဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာအာရုံစူးစိုက်မှု, ရွှင်လန်းခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရာအားလုံး "နိုးနိုးကွားကွား" အဖြစ်သူတို့ရဲ့ယန္တရားအတွက်ဆင်တူကြသော်လည်းသူတို့တစ်တွေသိပ္ပံနည်းကျအမြင်ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သုတေသနစာပေ၏အရေအတွက် modafinil ကဤအချက်များအားလုံးအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသထားတယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့, ကွော, မူးဝြေခင်း, ဒါမှမဟုတ်အခက်အခဲအိပ်ပျော်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများမဆိုဆက်လက်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာပါက, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးပြောပြပါ။
သူသို့မဟုတ်သူမကိုသင်အကျိုးအတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းတရားသဖြင့်စီရင်သောကြောင့်သင်၏ဆရာဝန်ကဒီဆေးကိုသတ်မှတ်ထားသောမူကြောင်းကိုသတိရပါ။ ဒီဆေးကိုအသုံးပြုပြီးလူအတော်များများလေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူး။
(ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု, ရှုပ်ထွေးမှုများ, စိတ်ကျရောဂါ, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ၏ရှားပါးအတှေးကဲ့သို့) အစာရှောင်ခြင်း / pounding / မမှန်နှလုံးခုန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကို: သင်အပါအဝင်မည်သည့်ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ရှိပါကချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ရင်ဘတ်နာကျင်မှု: သင်အပါအဝင်မည်သည့်အလွန်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ရှိပါကချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရယူပါ။
ဒီမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအလွန်လေးနက်သောမတည့်တုံ့ပြန်မှုရှားပါးသည်။ အဖျား, ရောင်ရမ်း lymph node များ, အဖု, ယားယံခြင်း / (အထူးသဖြင့်မျက်နှာ / လျှာကို / လည်ချောင်း၏) ရောင်ရမ်းခြင်း, ပြင်းထန်တဲ့မူးဝြေခင်း, ဒုက္ခအသက်ရှူ: သင်အပါအဝင်လေးနက်မတည့်တုံ့ပြန်မှု, မဆိုရောဂါလက္ခဏာတွေသတိထားမိလျှင်သို့သော်ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရယူပါ။
ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းမဟုတ်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး။ သငျသညျအထကျစာရင်းမကအခြားဆိုးကျိုးများသတိထားမိခဲ့လျှင်, သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆက်သွယ်ပါ။
6.It brainpowder တိုးမြှင်အတွက် modafinil အဘို့သည်ကြီး
ပြည်သူ့သမိုင်းအားလုံးအတှကျဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့ brainpower မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုအတွင်းသိပ္ပံနည်းကျအားထုတ်မှုအနည်းငယ်အလားအလာဓာတုပစ္စည်းထင်ရှားပေမယ်သာရှိသည်ဟု modafinil သိမြင်မှုတိုးမြှင့်၏တိကျခိုင်မာစွာစာမေးပွဲများလွန်ပြီ.
ကြောင်းခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်ပြိုင်ဘက်သို့သော်ရှိပါသည်: modafinil (စ provigil အဖြစ်ရောင်းစား) မူးယစ်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးအိပ်ပျော်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုသည့်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစစ်မှန်တဲ့စမတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ရောဂါ-စေခြင်းငှါ, အသစ်တစ်ခုကိုစနစ်တကျ review.it enchances အာရုံစူးစိုက်မှုအရသိရသည် , သင်ယူခြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်, ကြှနျုပျတို့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့် drinkable ကို formats ၏အရသာအမျိုးမျိုးမပါဘဲလည်း (ကဖိန်းဓာတ်၏စွဲလမ်းအရည်အသွေးတွေမရှိဘဲအားလုံးကြောင်းမ creatively.and စဉ်းစားရန်ကိုသုံးပါ -which မြှင့်တင်ရန် "အရည်ထောက်လှမ်းရေး" ဒါပေမယ့်ပွဲတစ်ပွဲဆပ်ဖို့သေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းရဲ့ ) ။
ကဖိန်းဓာတ်ကိုမကဲ့သို့သော narcolepsy နှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်အဖြစ်အိပ်ပျော်ခြင်း-related အခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ 1998 ကတည်းက US မှာသတ်မှတ်ထားသည့်ထားပြီးဖြစ်သော Modafinil, အများကြီးရွှင်လန်း heightens ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကိုကအခြားသိမြင်မှုအကြိုးခံစားခှငျ့ပေးနိုငျကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုမညီမညာဖြစ်နေသောခဲ့ကြသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများကိုတက်ကိုရှင်းလင်းစေရန်, သုတေသီများထို့နောက်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှအထူးဘယ်လိုကြည့်ရှုကြောင်း 24 နှင့် 1990 အကြားထုတ်ဝေ 2014 လေ့လာမှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ modafinil အပေါ်သက်ရောက်မှု သိမှတ်ခံစားမှု။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သည့်၎င်းတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် ဥရောပ Neuropsychopharmacologyသူတို့ modafinil အကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရလဒ်များထိခိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတာဝန်များကို-ထိုကဲ့သို့သောအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့် detect မသေချာသော-ခဲ့ဘူးအရောင်ကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်အထူးသဖြင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်အဖြစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် modafinil သက်ရောက်မှုကြည့်ရှုကြောင်းသုတေသန။
အထက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မှစ. ထောက်လှမ်းရေးမြှင့်တင်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးများတစ်ခုချင်းစီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်နှင့်သင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကကွာကိုစားခံရကြောက်လန့်နေ carefully.If Modafinil သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်နိုင်သည်ယူထို့နောက်ခေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။
အချို့သော ထောက်လှမ်းရေးမူးယစ်ဆေး ဈေးကွက်ထဲမှာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအချက်များကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တွေ့ပြီကြောင်းပြသထားပါတယ် ထောက်လှမ်းရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဒါပေမယ့်အသီးအသီးမူးယစ်ဆေးဝါးသတိပေးဖို့လိုပါတယ်, အချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်လိုအပ်နေပါသည်။
ကဖိန်းဓာတ်: ရှေးအကျဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးစိတ်ကြွဆေးတစ်ခုမှာ။ ပြည်သူ့ဖိန်းရဲ့လှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာ (ဖြစ်ကောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ) အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်; သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများခဏတာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သည်းခံစိတ်လျင်မြန်စွာတက်ဆော။
နီကိုတင်း: ဒါ့အပြင်ဆေးဖက်ဝင်ရည်ရွယ်ချက်များ၏အကွာအဝေးအဘို့နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာအတွက်အသုံးပြုမယ့်လှုံ့ဆော်။ ဒါဟာအလွန်စွဲလမ်းသည်နှင့်များစွာသောအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
ဖက်တမင်းဆေးပြား (Benzedrine, Adderall): ပထမဦးစွာ 1887 အတွက်ဖန်တီး။ Benzedrine ကလေးငယ်များအတွက် hyperactivity ဆက်ဆံဖို့ပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖက်တမင်းဆေးပြားဦးနှောက်ထဲမှာ norepinephrine နှင့် dopamine ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်, သို့သော်ဝင်းစွဲလမ်းဖြစ်နှင့် hyperactivity, အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး, နှောင့်အယှက်အိပ်ပျော်ခြင်းတောင်မှစိတ္တအပါအဝင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အကွာအဝေးနှင့်တကွကြွလာနိုင်ပါတယ်။
Methylphenidate (Ritalin): ပထမဦးစွာ 1954 အတွက်စျေးကွက်နှင့် hyperactivity ကုသမှုအတွက် 1960s အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်။ ဒါဟာ 1990s အတွက် ADHD များအတွက်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူကြောင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေနိုင်ပြီး ADHD နှင့်အတူသူတို့အဘို့အာရုံစိုက်ပေမယ့်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်အလုပ်အကူအညီအဖြစ် Off-တံဆိပ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။ တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Ritalin တစ်သည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ကြလော့။
Acetylcholinesterase inhibitor (Aricept): အဆိုပါ 1990s အတွက်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အချို့သောလေ့လာမှုတွေမှာပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Armodafinil အခြို့သောအိပ်စက်ခြင်းမမှန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ်ကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဤသည် narcolepsy, အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း, အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ shift ပါဝင်သည်။
Modafinil: မူလက narcolepsy ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအထူးသဖြင့်ခက်ခဲတာဝန်များကိုဖြည့်သောအခါ, သိမြင် function ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကအတော်လေးသေချာမသိကြ ဘယ်လို modafinil အကျင့်ကိုကျင့် ဒါမှမဟုတ်ဘာ modafinil ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတူလိမ့်မယ်။
Armodafinil vs Modafinil: သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာ?
"ဒါကြောင့်အရာတစျခုထို့နောက်သင်တို့အဘို့ သာ. ကောင်း၏? ဤမေးခွန်းကိုလူတိုင်းကိုအမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသည်အဖြစ်ဖြေဆိုရန်အနီးရှိမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဝေမျှပါလိမ့်မယ် နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို အရာသင်ဆုံးဖြတ်ကူညီလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေမယ်အရေးကြီးသောမှတ်ချက်: ငါသွားမတိုင်မီငါမဆိုဆေးဝါးကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးပြန်လည်ရောင်းချသူများအဘို့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာထုတ်ဖော်ရန်လိုသည်။ ငါငါ့အဒေသခံယေဘုယျ Practitioner မှရရှိသောအရာ modafinil များအတွက်ဥပဒေရေးရာဆေးညွှန်းရှိသည်, ထိုအ industries.Secondly မှမဆိုဆက်ဆံမှုမရှိကြပါဘူး။ ငါဆရာဝန်တစ်ဦးမဟုတ်, သို့ဖြစ်. ဤဆောင်းပါးတွင်သင်တို့ရှေ့မှာဗဟုသုတ, လိုင်စင်ရဆေးဘက် Practitioner နှင့်အတူဟောပြောသောအပြင်းအထန်တောင်းဆို whatsoever.I ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုမဆိုပုံစံအဖြစ်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ငါသည်သင်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းမသိရပါဘူးငါသည်လည်းသင်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇမိတ်ကပ်မသိရပါဘူး modafinil သို့မဟုတ် armodafinil ယူပြီး.
တတ်နိုင်သမျှအကြှနျုပျ၏နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်တိကျမှန်ကန်အောင်ငါသည်ဤဒြပ်ပေါင်းများ ingesting နေတုန်းကအောက်ပါစည်းမျဉ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်။ ပထမဦးစွာငါနှစ်ဦးစလုံး modafinil ဖြန့်ဖြူးမယ့်ထုတ်လုပ်သူကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် armodafinil.I အိန္ဒိယအခြေစိုက်နေသော Sun က Pharma ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်တံဆိပ်များ '' Modalert 'အောက်က modafinil နှင့် armodafinil ထုတ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နဲ့' Waklert '' respectively.I ကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ခုဤဝယ်ယူ နှစ်ဦးစလုံးသည်အိန္ဒိယတည်ရှိသောသူပေးသွင်း (ကျနော်ဒီနေရာမှာတစ်ဦးခြွင်းချက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအကြောင်းသုံးသပ်ချက်ကိုစာဖြင့်ရေးသားပါတယ်) ။
ငါသည်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, အသုတ်နံပါတ်များကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲများနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့စစ်မှန် product.Tolerance ingesting ခံခဲ့ရကြောင်းသေချာစေရန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် Spectrometer မှတဆင့်ဝင်းကိုအတည်ပြုသူတို့ရှိသည်အဖြစ် modafinil နှင့် armodafinil တို့နှင့်လည်းပြဿနာဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသော 15 နာရီဝက်ဘဝဒြပ်ပေါင်းများ switching မတိုင်မီလုံးဝဝင်း metabolise ဖို့ငါ့ကိုယ်လုံလောက်သောအချိန်ပေးသော် / ပိတ်လေးရက်နှစ်ရက်: ဖြင့်ငါသံသရာမှတစ်ဦးချင်းစီ၏အကြှနျုပျ၏ဆေးများဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဒီစီမံခန့်ခွဲ။
armodafinil modafinil သာ '' တက်ကြွ '' တစ်ဝက်ပါရှိသည်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သည်, ထိရောက်သောနှိုင်းယှဉ်ထိုး 0.50 ဖြစ်ပါသည်: 1.00 ။ ငါယေဘုယျအနေနဲ့အတော်လေးအာရုံစိုက်နှင့်မောင်းနှင်စိတ်ထဲအောင်မြင်ရန် modafinil ၏ 300mg ယူပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့် 150mg armodafinil ငါကိုအသုံးပြုကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။
အခြို့သောအတွေ့အကြုံများကနေ modafinil ၏သုံးသပ်ချက်ကို
"ငါသည်နှစ်ခုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပထမတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာငါ modafinil ဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ modafinil ၏ဆိုးကျိုးများ အဆိုပါ dose.You စားသုံးပြီးနောက် 40 မိနစ်အကြောင်းကိုတာဝန်ခံယူရန်စတင်ရုတ်တရက်အလုအယက်တွေ့ကြုံခံစား (သင်ကတခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလုပျကဲ့သို့) မဟုတ်ဘဲတစ်သင်၏မျက်စိကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်နှင့်သင့်ဦးနှောက်ကို '' ပစ်ခတ်ရန် '' ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်သည် effectively.It ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့ပိုပြီးသင့်ရဲ့အာရုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်သကဲ့သို့သင်တို့ modafinil (နှင့် armodafinil) ယူမီလုပ်ဖို့အရေးကြီးသောအရာများကိုစာရင်းတစ်ခုလုပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နှစ်နာရီပြီးနောက်သင်တစ်ဦးအနည်းငယ်မြင့်မားသောစိတ်ဓါတ်များတို့နှင့်ကြီးသောအရာတစ်ခုခုပြီးမြောက်ဖို့ပြင်းထန်သော drive ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်သတ်မှတ်ထားသောတာဝန်မှတဆင့်တပ်များအဖြစ်မာနထောင်လွှားခံစားရနှင့်သင်တစ်ခုခု great.At လေးပါးကိုနာရီအမှတ်အသားဆီသို့ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်သင့်ဦးနှောက်ကတော့ခိုင်မာနေဆဲပစ်ခတ်မည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်၏အလုပ်အပေါ်ကျနော်တို့မှာအများကြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်သင့်ရဲ့လိုင်းသင်သည်လိမ့်မည် (မိုင်းမကဲ့သို့) တစ်ဦး extroverted ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလိုအပ်တယ်ဆိုလျှင် အလွန် talkativ ခံစားရတယ်eဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. (အဘယ်သူမျှမပေါ့လျော့သူပြောနေတာ) ။ သင်တစ်ဦးမစ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦးလူသ / အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နှငျ့သငျန်းကျင်ရှိသူများအနေနဲ့သတိထားမိပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးပတ်လည်6နာရီအမှတ်အသားလိပ်ကြောင့်, သင်ကလမ်းဆုံလမ်းခွမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖြစ်စေနိုင်လာမယ့်5နာရီအလုပ်တခုကြီးမားငွေပမာဏကိုထုတ်တွန်းဆက်လက်သို့မဟုတ်သင်အပြီးသာမန် evening.The နံနက်အနားယူနှင့်ရှိသည်ဖို့စတင်နိုငျသညျ, သငျသညျမဆို '' ရက်နာ '' ရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျသငျတို့အဘို့အအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် သောက်သုံးသောထပ်ခါတလဲလဲအခါလာမည့်နှစ်ရက်။
သက်ရောက်မှုကြောင့်အမြန်သည်းခံစိတ်တည်ဆောက်-အထိခြီပါလိမ့်မည်သကဲ့သို့ငါ (နှင့်3ရက်ပေါင်းချွတ်) သင်တတန်းအတွက်ထက်ပိုမို4နေ့ရက်ကာလအဘို့ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူကြောင်းအကြံပြုကြပါဘူး။ သငျသညျတသမတ်တည်းအပြည့်အဝသက်ရောက်မှုကိုခံစားနိုင်အောင်သင့် system ထဲမှာဒြပ်ပေါင်းရှင်းလင်းရန်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိန်ပေးပါ။
AASraw ထံမှ modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်
သင်အွန်လိုင်းအများအပြား Modafinil အမှုန့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ပါသည် စစ်မှန်သော Modafinil ဝယ်ဖို့အွန်လိုင်းအမှုန့်။ စျေးကွက်မှာအတုထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်း Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်သည့်အခါဒါသငျသညျတရုတ်ထံမှ AASRAW အဖြစ် realiable source.Such ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။
AASRAW အားဖြင့် Modafinil အမှုန့်ဈေးကွက်အပေါ်အများဆုံးရှာကြပြီးနောက်အများစုတတ်နိုင်နှင့်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးအ modafinil ဖြစ်ပါတယ်။ AASRAW အသုံးပြုသူများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယင်း၏ potency.modafinil အကြောင်းကို raving နှင့်အတူအွန်လိုင်းလက်ရှိအရောင်းရဆုံး modafinil အမှုန့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်တစ် Eugeroic သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်အေးဂျင့်မြှင့်တင်မယ့်နိုးနိုးကွားကွားဖြစ်ပါတယ်။ modafinil ၏သက်ရောက်မှုယခု aasraw အမှုန့်ကိုဝယ်, သင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုမီးရှို့ခြင်းမရှိဘဲနိုးနိုးကွားကွား, သိမြင်မှုတိုးမြှင့်, ခံစားချက်တိုးမြှင့်, ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်အပျော့စား euphoria.If သငျသညျအသှေးကိုလိုခငျြလညျးပါဝငျ!
AASraw ထဲကဓာတုပစ်စညျးနည်းပညာ Co. , Ltd မှ,
ဟို steroids ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (testosterone, Trenbolone, Boldenone, Nandrolone, Drostanolone, Methenolone, SARMS, etc), ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကုန်ကြမ်းအမှုန့်, ဆီဆုံးရှုံးမှုကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပေးမှာအဓိက, ကလိင်ကုန်ကြမ်းအမှုန့် hormones ။
1 ။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မား
1) အရည်အသွေးနျ Standard: USP 35
2) သန့်ရှင်းစင်ကြယ်:> 99%
2 ။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့
4 ။ သုံးအခြေခံမူ
အလည်အပတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း Modafinil တစ်ခုနိုင်ရန်အတွက်ဆေးဆိုင်နှင့်ဖြည့်ပါ။ ဖြန့်ဝေခြင်း, ထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်နှင့်ငွေပေးချေ၏လမ်း၏နေရာအရပ် Define ။ 30 မိနစ်ကာလ၌, သင်သည်သင်၏အမိန့်၏အတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းdays.⇒အတွင်းကိုအပ်ပါလိမ့်မည်www.aasraw.com.
8910 Views စာ
Clostebol Acetate အမှုန့်များ၏ဆိုးကျိုးများ: အဘယ်ကြောင့်လူပေါင်း Tbol ကိုချစ်?	တရုတ်နိုင်ငံတွင် methenolone enanthate အမှုန့်ပေးသွင်းသူထံမှရောင်းချရန် Methenolone enanthate